Archives fanadiovana - Fanisana ho an'ny Fanjakana
Tag Archives: fanadiovana
Gisella - Inona no antenainao?
… Taorian'ny fahotana rehetra natao?
Luz de Maria - Manasivana ny varimbazaha
Luz de Maria - Tsy hitovy amin'ny fiainana intsony izao
Aza matahotra: miandry ny Legiona Selestialy rehetra
Pedro Regis - Marary ny olombelona ary mila sitrana
Atolory ahy ny tananao ary hitarika anao amin'ny fandresena aho.
Edson Glauber - Hitombo anao ny fanaintainana
… Nahatonga anao nitomany be ianao satria mbola marenina amin'ny feon'ny reny.
Pedro Regis - Fisedrana naharitra ela
Aoka ho feno fanantenana ianao. Ny ho avy ho tsara kokoa amin'ny olo-marina.
Gisella Cardia - Pretra: Mitenena ny fahamarinan'Andriamanitra
Mbola tsy azonao tsara ny dikan'ny hoe ho vonona amin'ny fotoana ho avy.